समाज – Yuwa Aawaj
Jun122021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : पछिल्लो समय मा सा’माजिक सं’जाल मा निकै नै च’र्चा कमाएका सचिन प`रिवार को आमा पहिलो पटक मि|डिया मा आएकी छिन्। सचिन को बुबा ले घरमा एउटी श्रीमती हुदा`हुदै अर्को ल्या’एका हुन् भनि संचिन कि आमाले भनेकी छिन्। अहिले भने आफ्नो छोरा सचिन लाई खो’ज्दै सचिन को आमा मि’डिया सामु आएकी छिन्। सचिन आमा`को का’ख बाट अ’लग भएको ७/८ महिना भएको रहेछ। आमा मिडिया मा आए ल’गत्तै सचिन को बा’ल्यकाल को पुरानो भिडि`यो सा’र्बजनिक भएको। बुबा तेजेन्द्र आमा सरिता को साथ मा हुदा धेरै सुन्दर , खुशी थिए सचिन , ढुंगा गिट्टी कु’टेर भए पनि सचिन लाई प’ढाईरहेकी थिइन्। सचिन लाई हु’र्काईन बढाईन ठुलो बनाईन , तेजेन्द्र ले दो|स्रो बि’बाह गरे पछि सन्तान संग अ’लग बस्नु पर्यो। दुई बर्ष सम्म श्रीमान को मा’या र स’न्तान पाउछु कि भनि दुई बर्ष सम्म कु’रिन दुवै केहि नपाए पछि सचि`नकि आमा स|रिता ले दोस्रो बि’बाह गरेकी हुन्
सबिता भण्डारी प्रकर’णको अर्को खास पोल खुल्यो, हेर्नुहोस् केसम्म गरेका रहेछन् ससुराले !
चितवन : आफ्नै ससुराले बुहारी को गो'प्य अ'ङ्गमा छुने जस्ता नराम्रा हर्क'त गरेका भिडियोहरु एकाएक मिडियामा आइरहेका छन् । परिवारभित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घ'टनाको विरो'ध गरेका छन् । आफ्नै बुहा'रीमाथि कु दृष्टि लगाउने ससुरालाई देश'व्यापी रुपमा क'डा का'रबाहीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घट'ना निकै रहस्यमय रहेकाले प्र'हरीले अ'नुसन्धान गरिरहेको छ । के हो त वास्त'विकता त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ ।सबिता भण्डारीको माइती'पक्षले ह त्या नै गरेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । घटनाको प्रकृति हेर्दा आफै गरेको आ त्मह त्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुले चौ'तर्फी विरो'ध गर्दै आएका छन् । बुहारीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटकपटक दु र्व्य'वहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएको भन्ने अ'ड्कल पनि धेरैले गरेका छन । झा
महोत्तरी : को'भिड–१९ महाव्याधिले घरमै जक'ड्याएर राखेका बेला महोत्तरीको बर्दिबास–१४ स्थित एकीकृत नमूना मुसहर बस्तीका मुसहरले धुर्मुस–सुन्तलीको साथ पाएका छन् । महाव्याधि छल्न जिल्लामा जारी निषे'धाज्ञाबीच कतै काममा निस्कन नपाएर जकडिएका मुसहरलाई धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले खाद्यान्न राहत पु¥र्याएर दुःखमा साथ दिएको हो । शनिबार साँझ फाउण्डेशनका अध्यक्ष हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले ७० परिवार मुसहरलाई तत्कालको राहतका लागि खाद्यान्न वितरण गर्नुभयो । बस्तीका ७० परिवारले चामल, दाल, नुन, तेलसहित पुगनपुग एक महिना चल्ने सामग्री पाएका छन् । “घरघरै ३० किलो चामलको एक-एक बोरा पाएका छौँ” बस्तीकी आशा सादाले भन्नुभयो, “त्यसैअनुसार दाल, खानेतेल, नुन र चिउरा, दालमोठ र बिस्कुट पनि पोकामा रहेछ, अब खानाबिना मरिँदैन ।” धुर्मु र सुन्तली (हास्य कलाकार कुञ्जना घिमिरे) त आफ्ना लागि देउताजस्तै
धनगढी : निशे'धज्ञा भएपछी निकै व्यस्त व्यस्त सेलेब्रे'टीहरुलाई फुर्सद मिलेको छ। सबै सेलेब्रेटी आफ्नो आफ्नो घरमा थन्किएका छन्। पहिलेको निषे'धाज्ञामा कसैले चिया पकाउन सिकेका थिए। कसैले अन्डा उसिन्न सिकेका थिए। कोहि भने बोलेरै विवादमा परेका थिए। तर, यसपटकको निषेधाज्ञा अलि सुनसान भएको जस्तो लाग्नमा आएको छ। यसपटकको निषे|धाज्ञामा सेलेब्रेटीहरु चुपचाप बसेका छन्। कसैकसैले फाट्टफुट्ट देशको चिन्ता गरेर देशको बारेमा, देशको राजनितिक परिस्थितिको बारेमा स्टाटस लेखिरहेका छन्। कोहि समाजसेवामा व्यस्त छन्। यस्तै, अभिनेता पुष्प खड्का आफ्नो जन्मथलो पुगेर खेतिपाती गर्न थालेका छन्। चार दिन अघि कैलाली पुगेका पुष्पले खेत खन्दै गरेको फोटो पोस्ट गर्दै आफ्नो फेसबूकमा लेखेका छन्-‘नेपाल कृषि'प्रधान देश हो। मलाई आफू किसान हूनूमा गर्व लाग्छ।’ लागिहाल्छ नि। एक दिन पनि हैन एकछिन त हो। बर्षभरी खन्नु परेको छैन
काठमाडौ : मैतीदेवीस्थित सेतो पुल नजिकै विगत २४ दिनदेखि युबट्युब पत्रकार संघद्वारा निशुल्क भोजन गराउने कार्य भैरहेको छ। यो कार्य गंगा हल अगाडि पनि हुँदै आइरहेको र अन्य विभिन्न ठाउँमा बिहान बेलुकै चलिरहेको छ। यदि लक'डाउनले कसैलाई प्र'भाव पारेको छ भने त्यो वर्ग भनेको गरिखाने बर्ग हो।त्यसैले विगत २४ दिनदेखि नेपाल युबट्युब पत्रकार संघले भोजनको अभियान सुरु गरी गंगा हल अगाडि पनि प्रत्येक दिन बेलुका साँझ साँढे पाँच बजे देखि खाना खुवाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसपछि घुम्ती सेवा सुरू गर्दै कलंकी,कालीमाटी हुँदै मैती देवीमा समेत गएर सेवा दिँदै आइरहेको छ। यहाँ जो व्यक्ति हरूले खाना खान आउनुभएको छ उहाँहरू बास्तवमै यो लक'डाउनले पि'डीत भइ केही नपाएर आउनुभएको हुन्छ। यो केवल प्रचार नभएर नेपाल सरकारले कोहि पनि भोकै मर्दैन,कोहि कसैले पनि मागेर खानु पर्दैन भनेर बकम्फुसे कुरा गरिरहेको भएर सरकारलाई यथा
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश ।
काठमाडौ : पहिलो पटक यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को घोर्ले छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो, भिडियो सहित, प्रखर वक्ता पब्लिक स्पिकिङ बिजेता एबम दोहोरी गाएक रमेश प्रसाईं र उनकी श्रीमती समाजसेवी नन्दा सिंहको बिषयलाइ लिएर यतिबेला विभिन्न समाचार हरु आइरहेका छ्न। कतिपय संचारमाध्यामले रमेश प्रसाईं र नन्दा सिंहले जन्मदिए घोर्ले छोरालाई, रमेश प्रसाइ र नन्दा सिंहको घरमाछोराको आगमन लगाएतका शिर्षकमा समाचार लेखेको देखेपछी तपाइको जानकारिको लागि यो समाचार तपाइहरु माझ सेयर गरिरहेका छौँ। पूरा समाचार पढिसकेपछी सबैको जनकारिको लागि एक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। रमेश र नन्दा बैबाहिक बन्धनमा बाधिएको करिब ६ महिना भएको छ। ६ महिनामै छोराको जन्म भनेर समाचार आइरहदा धेरैजना अचम्मित हुनुभएको छ।नन्दा सिंहले बच्चालाई जन्म दिएको समाचार सत प्रतिसत झु’ट हो, अनि त्यसो भए वास्तविकत के हो त?
एउटा गरिब किसान र उसकी बूढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे । अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरू-संग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र खुसी थिए । उनीहरू बस्ने साइनिंग प्रान्तमा एउटा निरं'कुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो जो वृद्ध मानिस`हरूको स्वास्थ्यव`स्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डरा'उँथ्यो । यसले गर्दा एकदिन उसले एउटा कठो,र घोषणा गर्यो । उसले पूरै प्रान्तका बूढाबूढी`हरूलाई तुरुन्तै मारि`दिनू भन्ने व्यहोराको आ`देश दियो । वास्त`वमा त्यो बर्बरिक का'ल थियो र बूढा-बूढीहरूलाई म`र्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्यनै थियो । गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तनमनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठो`र हुकुम सुनेर उसको मन वे`दनाले भरियो । तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दै`नथ्यो । त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमा`लाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृ`त्यु दिनको लागि तयारी गर्यो । स
Jun22021 by Yuwa AawajNo Comments
डिसी : टिकटकबाट कमाएको पैसाले मोडल गरिमा शर्माले ४ सय जना गरिब दुखीलाई खाना खुवाएकी छिन् । को’रोना महामारीका बेला सबै जना समस्यामा छन् । स’मस्यामा परेकाहरूलाई सक्नेले सहयोग गरिरहेकै छन् । यस्तै, टिकटकबाट चर्चा कमाएर म्युजिक भिडियोमा जमिसकेकी मोडल गरिमा शर्माले पनि दुखमा परेका लगभग ४ सय जनालाई खाना खुवाएर सहयोग गरेकी छिन् । साथै, हाम्रो टिम नेपाललाई अन्य सेवाको लागि पन्ध्र हजार नगद हस्तान्तरण पनि गरेकी छिन् । आइतबार हाम्रो टिम नेपालसँगको सहकार्यमा गरिमाले भोकाएकाहरुलाई खाना खुवाएकी हुन् ।‘जनताको पैसा जनतालाई’ भन्ने नाराको साथ टिकटकबाट आएको पैसाले उनले सहयोग गरेकि हुन् । ‘लाइभ बस्दा फ्यानहरुले गिफ्ट पठाउनु हुन्छ । सोही गिफ्ट मैले दर्शकलाई सहयोग गरेकी हुँ ।’- गरिमाले बताईन् । लकडाउन अगाडि सम्म म्युजिक भिडियोमा दिनहुँ व्यस्त हुने गरिमाले आफूले सकेको सहयोग गरेको जानकारी दिइन् ।
गाउँमा एकजना भलाद्मी मानि`सकाे नि धन भएछ । उसका छाेरा`हरू र छर`छिमेक मिली ला स जलाउन लैजाने तयारी भइ`रहेको समयमा एक अपरि'चित व्यक्ति आउँछ र ला स को पाउ समात्दै भन्न लाग्छ “म र्ने मानिसले मसँग १५ लाख लिनु भएकाे थियाे, पहिला मला`ई उक्त पैसा कसले तिर्ने भन्नुहोस्, त्यस`पछि मात्र ला स काे दा'हसं स्कार गर्न लैजानु`हाेस् । अब तमाम मलामी`हरू खडा भएर तमा'शा हेरिरहेका थिए, छाेराहरूले बताए कि म र्ने मानिसले कहिल्यै कसै`सँग पैसा कर्जा लिएकाे कुरा गर्नु भएको थिएन । त्यसैले हामी याे पैसा दिँदैनाैँ । छाेराहरूले त तिर्दैनन् भने हामी छिमेकी`हरूले त तिर्ने कुरै भएन भन्न लागे छिमेकीहरू । ला स लाई बाेक्न खाेज्छन् तर त्यस मानिसले ला स काे पाउ समातेर बसि`रहेकाे हुन्छ । याे खबर घर`भित्रसम्म पुग्छ । बुहारी`हरू हामी`लाई थाहा छैन र पैसा ति'र्दै ति'र्दैनाैँ भन्छन । म र्ने मानिस`की एउटी छाेरी पनि थिइन
May292021 by Yuwa AawajNo Comments
अदालतमा एउटा मु'द्दा आयो , जुन मु’द्दाले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। अदा’लतमा सम्पत्ति बिबाद र अन्य घरायसी बिबादित केसहरु आइ नै रहन्छन् । तर यो मुद्दा धेरै नै फरक किसिमको थियो । एक ७० बर्षको बृद्ध ब्यक्ती ले आफ्नो ८० बर्षिय दाइलाई अदाल’तमा मु'द्दा दिएका थिए ।मु’द्दामा यस्तो लेखिएको थियो कि , मेरो ८० बर्षको ठूलो दाजु , अब बृद्ध हुनुभयो । त्यसैले उ आफ्नो ख्याल पनि ठिक सँग ले राख्न सकेको छैन । तर मैले प्रतिबन्ध लगाउदा पनि दाइ हाम्रो ११० बर्षकी आमाको स्याहार सुसार गरिरहेका छन् । म अहिले ठिक छु त्यसैले अब मलाई आमाको सेवा गर्नको लागि मौका दिनुपर्छ । र आमालाई स्याहार सुसार गर्नको लागि मलाई जिम्मा लगाइयोस । यो मु'द्दा ले न्याया'धीश महोदय लाई समय लिएर सोच्न बाध्य बनायो र कानुनी रुपमा यो मुद्दा निकै च'र्चाको बिषय पनि भयो। न्यायाधीश महोदय ले दुइभाइलाई सम्झाउनको लागि कोशिश गरे कि तपाइँहरु १५र१५
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2221)